News | इरान
News | Tag: इरान
एजेन्सी । इरानमा कोरोना भाइरसको महामारीको तेस्रो चरण सुरु भएको छ ।
कुनै समय मित्र थिए अमेरिका र इरान, कसरी बने कट्टर दुश्मन ?
एजेन्सी । सन् १९५३ मा जब ईरानमा अमेरिकी विरोधी भावनाको जन्म भएको थियो तब अमेरिकाले चार दिनमा प्रदर्शन गराएर सरकार गिराउने र आफ्नो पक्षको सरकार बनाउने काम गरेको थियो । त्यसअघि अमेरिका र इरानकाे सम्बन्ध राम्राे रहेकाे थियाे ।
इरानमा १० हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण
इरानमा भूकम्प गयो
एजेन्सी । इरानको उत्तरी क्षेत्रमा बिहीबार आएको ५.१ म्याग्नीच्यूडको भूकम्पका कारण एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै अरु धेरै व्यक्ति घाइते भएका छन् ।
अमेरिकामाथि इरानले परमाणु हमला गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
एजेन्सी । इरान र पश्चिमी देशबीचको परमाणु सम्झौता अन्ततः समाप्त भएको छ । यो सम्झौता चार वर्ष अगाडि भएको थियो ।
मेजर जनरल बाकरी भन्छन्ः इरानले आफ्नो सैन्य क्षमताको झाँकी मात्रै प्रस्तुत गरेको हाे
एजेन्सी । इरानका मेजर जनरल मोहम्मद बाकरीले इराकस्थित अमेरिकी बेसक्याम्पमाथिको आक्रमण आफ्नो सैन्य क्षमताको सामान्य झाँकी मात्रै भएको बताएका छन् ।
सुलेमानीको शवयात्रामा भागदौड हुँदा ५० जनाको मृत्यु
इरान । इरानको दक्षिणपूर्वी शहर केरमानमा जनरल कासिम सुलेमानीको शवयात्रामा सहभागी हुने क्रममा मङ्गलबार भएको भागदौडमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५० पुगेको छ । यसअघि दिइएको समाचारमा इरानी विशेष सुरक्षा बलका प्रमुख जनरलसुलेमानीको शवयात्राका क्रममा केरमानमा कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु भएको इरानी राष्ट्रिय टेलिभिजनले जनाएको थियो । उक्त घटनामा कम्तीमा २०० भन्दा बढी घाइते भएका बताइएको छ ।
इरानका ५२ ठाउँमा आक्रमण गर्ने ट्रम्पको चेतावनीपछि, अमेरिकी सरकारी वेबसाइट ह्याक
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका ५२ ठाउँमा तत्काल आक्रमण थाल्ने भनेर ट्वीट गरेको केही बेरमै एक अमेरिकी सरकारी वेभसाइट ह्याक भएको छ । ट्रम्पले नेपाली समयअनुसार आइतबार बिहान यदि तेहरानले अमेरिकी नागरिक वा सम्पत्तिमाथि फेरि आक्रमण गरे इरानका ५२ वटा स्थानलाई तत्काल निसाना बनाएर कडा प्रत्युत्तर दिने चेतावनी दिएको केही बेरमै ‘इरान साइबर सिक्युरिटी ग्रुप ह्याकर्स’ नामक समूहले वेभसाइट ह्याक गरेको जिम्मा लिएको हो ।
इरान अमेरिकासँग वार्ता गर्न तयार, आर्थिक प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्नुपर्ने शर्त
तेहरान (एजेन्सी) । इरानी राष्ट्रपति हस्सन रौहानीले संयुक्तराज्य अमेरिकाले आफूहरु विरुद्ध लगाएको ‘अवैधानिक’ आर्थिक प्रतिबन्धहरु फुकुवा गरेमा आणविक वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।